मेरा सपनाहरु : नाम त कती हो कती ???
नाम त कती हो कती ???
आजभोलि किन किन बिगत मात्रै सम्झिन मन लाग्छ शायद जिबनमा नयाँ सुरुवात नै नभएर पो हो कि या त नयाँ नेपालको नारा जस्तै मेरो जिबनको नयाँ नारा पनि संबिधान जतै लेखिदै त छैन कतै .....
हो हुन त बर्तमान भन्दा त जिबनको सुरुवात तिर अझ सजिलो गरी भन्दा स्कुले जिबनका कुराले मन भुल्दो रहेछ । अफिस जानु भन्दा प्रया २ /३ घण्टा नै पहिला उठ्छु साथीहरु घुरिरहेका हुन्छन अनी के गरु गरु लेख्न बस्यो नयाँ कुरा केही पनि आउँदैन अनी फेरी बीतेका पलहरु सम्झियो रमाइलो मान्यो , एक्लै हाँस्यो बस चलिरहेछ जिन्दगी ......
कुरो त स्कुले दिनहरुकै बढी सम्झना आउछ । निकै चक चक गर्नु पर्ने अनी जिस्किनु पर्ने बानी अनी उस्तै साथी हरु पनि । एक पटक स्कुलमा नाम फेर्ने चलन निकै चल्यो हाम्रोमा । बिसेश सम्झिन्छु यस्तै ८ / ९ कलास तिरको कुरा हो केटी हरु पनि निकै नाम फेर्थे । नामै नाम मा एकले अर्कालाई जिस्काउने नाम पनि निकै झुन्डिन्थ्यो मुखमा । जसलाई रिस उठ्यो उसले ढुङ्गा हरुमा नाम कोरेर नै हैरान । यो नामहरु को दौरानमा निकै सास्थी पनि खेप्नु पर्‍यो मैले ।
एक दिन एउटा बिष्णु भन्ने साथीले क्लासमा मलाई खुर्सानी भनेर बोलायो उफ सबैले मलाई खुर्सानी पो भन्न थाले । घर मा गयो घैटे रे अनी घर बाहिर गयो खुर्सानी रे पर्नु पिर पर्‍यो मलाई त । मैले पनि अरुलाई नाम काट्न त नसकेको होइन नि तर पनि चित्त नबुझ्ने । एक दिन एउटा केटी ले मलाई भेन्टा भनेर बोलायो पहिला त बुझिन तर त्यस्ले त खुर्सानी को भेन्टा पो भनेकी रहिछे । मैले पनि मुशी भनेर भनिदिए अनी त उसको नाम पनि मुशी नै रहयो । सम्झिदा पनि हाँसो लाग्छ ख्याल ख्याल मा राखेका नाम ले त निकै छाप पो पार्दा रहेछन । नाम पनि कस्ता कस्ता कसैको थेप्पारे , कैला , पिडालु , कसैको फौसे , बौने , टुप्पी , निउरे उफ केटी का त झन दारे , दाउरी , मोटी , चम्चा य्स्ता धेरै नाम थिय हाम्रा स्कुलमा । झन्डै २/ ३ बर्षा सम्मा निकै पिर पारे यिनै नामले । म त झन निकै पीडित बनेको थिय यि नामहरुले किनकी सबै भन्दा अली लुरो कमजोर खालको थिय म मेरा स्कुले साथीहरुमा अनी त अलिकती चर्को स्वर गरे त पिटाइ खाइएला भने डर । फेरी एरुले जतिबेला पनि भेन्टे , खुर्शानी , घैटे , लम्बु , उफ नाम हरु सम्झिदा पनि ......
जे होस् एस् ल् सि सकिए पछी भने कसैले त्यो नाम बाट बोलाउने आँट पनि गरेनन हुन त समयको परिवर्तन संगै सबै कुरा हरु फेरिन थाले । अहिले सबै साथीहरु का नाम सम्झिदा कहिले हाँसो लाग्छ कहिले त निकै मिस पनि गर्ने गर्छु । साथीहरु हजुरहरुका पनि होलान है यस्तै नाम हरु कृपया कोमेन्ट गर्न कन्जुसाइ नगरनु होला है .......
सारै राम्रो टेम्पलेट राख्नुभएछ.... तर शिर्षकको "सपना" र
"हरु" एकै डिक मुन्तिर हुनुपर्ने होइन र ?
Ram Bahadur Thapa Badal said...
सुन्दर छ टेम्पलेट अनि तपाँईले लेखेको कुरा ।तपाँईको कुरा पढेर आफ्नो स्कुले जिवन को पनि याद आयो । साँचै नै कति रमाईला हुन्थे ति दिनहरु।
असारे १५ को साह्रै याद आयो मलाई
प्रियसिलाई असारे सम्झना
एउटा पत्र !!
मैले चोरेको १ रुपैया
कहिलेकाँही जिन्दगी लाई फर्केर हेर्दा